Ny marina… manafaka | NewsMada
Ny marina… manafaka
Par Taratra sur 30/03/2016
Ohabolam-bazaha ny hoe ny marina rehetra tsy filaza. Ho an’ny Malagasy: vato atora-pody ny marina, tsy mataho-bary ho raraka, ohatra, tsy atahorana izay mety ho fahavoazana amin’ny famoahana na filazana ny marina. Na izany aza, ny marina mitavozavoza, tsy mahaleo ny lainga tsara lahatra.
Naman’ny lainga ny marina tsy avoaka tanteraka sy manontolo? Mbola adihevitra ny hoe misy marina tsy filaza. Na mety tsy ho fantatra aza, na ho ela na ho haingana… Raha mbola tsy mivoaka ny marina, mahazo vahana ny honohono, indrindra ho an’ny tompon-draharaha: manao tompon-trano mihono.
Karazan’izany izay iainana amin’izao? Ny amin’ny « Raharaha Anjorozobe« , ohatra: misy ny manabory fotsiny izao: efa mifarana, hono, ny amin’iny, tsy mila resahina intsony. Vita amin’ny karazana fifanarahana ve ny marina? Ao ny mitaky hatrany ny fitadiavana sy famoahana ny marina.
Eo koa ny « Raharaha bolabolana andramena 30 000 latsaka tratra any Singapour« . Inona ny marina? Tsy olana ny maha ofisialy na tsia ny ira-panjakana, fa ny filazana hoe ara-dalàna ireo andramena tany. Efa voararan’ny lalàna ny fanondranana izany, na iza na iza manao azy? Na iniana tsy avoaka manontolo ny marina…
Ahoana koa ny amin’ny « Raharaha fakana an-keriny tany Toamasina« ? Andrasana ny marina. Misy tahotra ny famoahana izany? Na fanahiana korontana… Santionany ireo, fa inona ny marina ny amin’ny asan-dahalo any atsimo: avy aiza ny basy? Na kere ny mponina any atsimo, na tsy ampy sakafo ihany…
Eo amin’ny tantara, be ny marina tsy fantatra. Tsy filaza avokoa? Ny « Raharaha 29 marsa 47« , ohatra, ny « Raharaha Ratsimandrava« , ny « Raharaha 10 aogositra 1991« , ny « Raharaha 26 janoary 2009 », ny « Raharaha 7 febroary 2009« … Tsy fahatokisan-tena ny tsy famoahana ny marina rehetra hoe tsy filaza avokoa?
Raha ny marina rehetra tsy filaza avokoa, tsy izay lazaina rehetra dia marina… Tsy marina avokoa izay lazaina etsy sy eroa, raha mbola tsy mivoaka tanteraka sy manontolo ny marina? Fa manafaka ny marina amin’ny fifampiahiahiana lava, honohono, fifanomezan-tsiny…
Eto Madagasikara: mihabetsaka ireo olona diabetika 15/11/2018
BAREA – Fifanintsanana CAN 2019: nasiana fanovana ny mpilalao 15/11/2018
Rallye – Tompondaka 2018: mifanakaiky ny isan’i Rivo sy i Tahina 15/11/2018
Kitra – «Total CAF Champions League »: manomboka ny fanazarantena ho an’ ny CNaPS Sports 15/11/2018
Fanehoan-kevitry ny depiote: “Tokony hahay haka lesona…” 15/11/2018